တာရှည်ခံ Flame နှောင့်နှေး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ တာရှည်ခံ Flame နှောင့်နှေး အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
တာရှည်ခံ Flame နှောင့်နှေး
ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူအတွက်အထူးပြုကျနော်တို့ တာရှည်ခံ Flame နှောင့်နှေး in Taiwan။ ကျနော်တို့ကုန်စည်များ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပေါ်အခိုင်အမာဆိုကြသည်ဖောက်သည်အပ်ရဦးမည်, ဒါကြောင့်သူတို့စျေးကွက်အတွက်နာမည်ကောင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအဘိုးနှင့်ဈေးကွက်တွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ R & D နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းမှာ OEM သို့မဟုတ်နှစ်ဖွဲ့ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာဖြစ်ကြ၏။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သင်တို့နှင့်အတူအအောင်မြင်ရန်ကျွန်တော်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပိုမိုမော်ဒယ်များကျေးဇူးပြုပြီးချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု!
ထုတ်ကုန် applications တွေကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကကျွန်တော်တို့ဖောက်သည်ရဲ့နဲ့သူတို့ရဲ့ End-user ဖောက်သည်များကတန်ဖိုးထားတန်ဖိုးထားကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့မကယ်မလွှတ်သောအရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်, သစ် clients များကြိုဆိုပါတယ်။
ပုံစံ - CT-120-2H
Polyester အတွက်ကြာရှည်ခံသည့် Flame Retardant
မှန် CT-120-၂ နာရီ
ဒီအေးဂျင့်(မှန် CT-120-၂ နာရီ)အထည်အလိပ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ဂရုတစိုက်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ fireproofing အေးဂျင့်သည်.ဒီအေးဂျင့်ပစ်ခတ်သောအခါ,၎င်းသည်မီးခိုးငွေ့များနှင့်မီးခိုးငွေ့များကိုထုတ်လွှတ်သည်.၎င်းသည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးမီးငြိမ်းရန်ဖြစ်သည်.
ဤအေးဂျင့်သည်အထူးပုံသေနည်းပါ ၀ င်ပြီးအလွယ်တကူ hydrolyzed နှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးမည်မဟုတ်ပါ,နှင့်မဟုတ်သောဖြစ်ပါတယ်-အဆိပ်.
ဒီအေးဂျင့် polyester မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်,ဝါဂွမ်းနှင့်ပိတ်ချောနှင့်၎င်းတို့၏ရောနှောပိတ်ထည်.
ယေဘုယျသောက်သုံးသော3ထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်%~5%အဆိုပါ dilution အကြံပေးအဖွဲ့သို့မီးနှောင့်နှေး၏ဖြေရှင်းချက်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/durable-flame-retardant.html
အကောင်းဆုံး တာရှည်ခံ Flame နှောင့်နှေး ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် တာရှည်ခံ Flame နှောင့်နှေး ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ တာရှည်ခံ Flame နှောင့်နှေး ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan